ငယ်ငယ်တုန်းကမို့ပါ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ချိုသင်းရေ ကဗျာ ရွတ်တာတွေကို ပွဲပျက်အောင် လုပ်တာတော့ မကောင်းဘူးကွယ့်း)
အမရေ ရီလိုက်ရတာ ခုထိလဲ ရီနေတုန်းပဲ။ ဟီးဟီး ပိုးတုံးလုံးကြီးပေါ် တက်ခုန်နေတာရော၊ခြင်ထောင်ဆွဲဖယ်လိုက်လို့လန့် သွားတာရော အို အကုန်လုံးပါဘဲ။ အမရေးသမျှကို စိတ်ကူးထဲမှာ မြင်ယောင်ကြည့်လို့ ရတော့ ပိုရီရတယ်။ လင်းတို့ ဘလော့ဂါတွေ အားလုံးလဲ ဒါမျိုးစုပြီး စကားပြောရရင် ပျော်ဘို့ ကောင်းမှာနော်။
မချိုသင်းကလည်း ကျနော့်သမီးကျနေတာဘဲ။ သမီးက ကျနော်ဘာလုပ်လုပ် အတည်ပေါက် လုပ်လို့မရဘူး။ အကုန်ရယ်တာဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျနော့်မှာ မှင်နဲ့ မောင်းနဲ့ ကဗျာရွတ်ခဲ့တာလေးကို မဒမ်က ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်လာပေးလို့ ကိုယ့်အသံ ကိုယ့်ဟန်လေးကို အိမ်မှာပြန်ခံစားမလို့ရှိသေး သမီးက နောက်ကနေ ပုခုံးပေါ်က ကျော်ကြည့်ရင် တဟိဟိ၊ တခွိခွိနဲ့။ ဟဒယရွှင်ဆေး တိုက်ကျွေးနေတယ်များ မှတ်သလားမသိ။ ပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြခိုင်းတယ်။ အကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ရယ်ချင်လို့။
ဆရာမလေး ကျနော့်ဆီကိုလည်း လာလည်ပါဦး ...။
အမရေးတာတွေ ရုံးမှာဖတ်ပြီး ရီတာ ဘေးက လူတွေကတောင် ဘာတွေဖတ်နေတာလဲ မေးယူရတယ်…
ကဗျာဖျက်တာမှအစ ခြင်းထောင်နဲ့လုံး တက်ခုန်ပြီ… မျက်နှာကြီးလည်း မြင်ရော… လန့်သွားတာပဲ က အဆုံး… တကယ်ကို ရီလိုက်ရတာ….
သေချာတော့ မမှတ်မိဘူး ကဗျာဆရာကြီးတယောက် “အဖေ့ရဲ့အမွေ ဓားရောင်ကဖွေး” ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ကဗျာစပ်နေတုန်း အပေါ့သွားချင်လို့သွားနေတုန်း အမတို့ကို စချင်တဲ့နောက်တယောက်က ၀င်စပ်လိုက်တာ “အမေ့ရဲ့အမွေ ပေါင်ခြံကဂွေး” လို့…
ကဗျာပျက်တဲ့အပြင် ထပ်စပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကဗျာဆရာကြီးက ဆရာကြီးတင်မိုးများ ဖြစ်နေမလား… :P
ဟား၂ အမရေ.. ကိုပီတိနဲ့ မလင်းလို မထိန်းနိုင် မရပ်နိုင်လို့ အသံထွက် ရယ်သွားပါတယ်း)
အမရေ ရေးတတ်လိုက်တာ ဆရာမမေငြိမ်းပြောသလို အမကတော်လိုက်တာဗျာ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်သိပ်ကောင်းတာပဲ ဆက်မျှော်နေမယ်ဗျာ
ချိုသင်းလဲ ဘော်ဘော်တွေ များနေပြီပေါ့။ မြန်မာဘလော်ဂါ လောကဟာ ပျော်စရာပါပဲနော်.. များများရေး... အမလဲ အားတာနဲ့ လာဖတ်တာပဲ သိလား...
အမရေ.. ရီ ရတယ်..ဟီး
ဘုရား ဘုရား ဒီတစ်ခါ LA ရောက်လို့ ချိုဏ္ဍ္ဂဂေဟာများတည်းမိလို့ကတော့ မမကို အရင် အကြောင်းကြားရမယ် အခုချိန်မှာများ မေ့ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကလို တက်နင်းခံလိုက်ရလို့ ကတော့ အမယ်လေး တွေးရင်းတောင် ကြောက်လာပြီ ဟီးဟီးဟီး
မချိုသင်းတစ်ယောက် သူ့ အိမ်မှာ လာမရှုပ်အောင် သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ သတိပေးနေတယ် ဗျို့ 
အဲဒီကဗျာဆရာကြီး နောက်လာအိပ်ရဲသေးလား… ရယ်လိုက်တာ stressတွေ အတော်ပေ့ါသွားတယ်….
ရင်ဘတ်ကြီးတို့၊ အန်ဖတ်တို့ တခါမှ မသုံးဖူးလို့ ..
ဒါပေမယ့် မောင်အံ့နဲ့ ငါနဲ့ ၂ယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင် ကိုယ့်ကဗျာရော သူများကဗျာရော အားလုံးကို ဟားတာပါပဲ။ လက်ရေးကဗျာစာအုပ်လေးတွေကို သတိရသေး ..
မရောက်မိတဲ့ တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ ကျနော် မဖတ်ရသေးတာ သုံးပုဒ်ကြီးများတောင် ရှိနေပါပေါ့လား။ အမရေးခဲ့သလိုပဲ ဂေါက်တံနဲ့ လှည့်နေရာကနေ အခုတော့ အင်ဂျင်က ကောင်းကောင်းကြီးကို အရှိန်ရနေပုံရတယ်။ ကျနော်တော့ ကဗျာဖျက်တာနဲ့ ပိုးတုံးလုံးကြီးပေါ် တက်ခုန်တာတွေကို ဖတ်ပြီး တဟားဟားနဲ့ကို ရယ်နေရတယ်။ :D